Ciidamada Huwanta ee dib u qabsaday Halgan oo la kulmay Oday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Halgan ( Mareeg)-Isagoo u warramayay Idaacad maxali ah ee Magaalada Muqdisho Max’ed Cumar Aadan Gaduudow ayaa ka warbixiyay kulamo Odayaasha dhaqanka ee deegaanka Halagan ay la qaateen Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM ee dib u qabsaday deegaankaasi.
Max’ed Cumar ayaa tilmaamay in Odayaasha ay ka wada hadleen sidii Ciidamada iyo shacabka deegaanka Halgan ay isula shaqeyn lahaayeen.
Al Shabaab ayaa isaga huleelay deegaanka Halgan kadib markii Ciidamada huwanta ah dib halkaas ugu soo noqdeen.
Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan ayaa ah deegaan istiraatiiji ah oo u dhexeeyay Magaalooyinka Baladweyne iyo Hiiraan halkaas oo la sheego in dhaq dhaqaaqyo ay ka sameeyaan Al Shabaab.
Eni makes gas discovery in Egypt’s deep waters, dubs it as ‘supergiant’